dayactirka jumlada qalabka Cryogenic, dayactirka, kormeerka maalin kasta - warshad iyo saarayaasha | Joisea
dayactirka qalabka Cryogenic, dayactirka, kormeerka maalin kasta
Erayada furaha u ah: dayactirka qalabka Cryogenic, dayactirka, kormeerka maalin kasta
Category: Service Dayactirka
Description: waxyaabaha Pivas iyo nidaamyada leeyihiin cimri dherer qabanin iyo isku halaynta, oo wax ku ool ah oo ku haboon marka dayactirka ama adeegyada waxaa looga baahan yahay. Shirkadda waxay bixisaa dhammaan noocyada dhululubada gaaska qalabada welded, dayactirka ...
Alaabta iyo nidaamyada Piva leeyihiin cimri dherer qabanin iyo isku halaynta, oo wax ku ool ah oo ku haboon marka dayactirka ama adeegyada waxaa looga baahan yahay. Shirkadda waxay bixisaa dhammaan noocyada dhululubada gaaska qalabada welded, dayactirka iyo dib u soo celinta ee noocyada kala duwan ee haamo biyaha lagu keydiyo, iyo waxay bixisaa dayactirka maalin kasta ee noocyada kala duwan ee nidaamka, dhuumaha iyo noocyada kale ee qalabka cryogenic.
Shirkadda waxay leedahay nidaamka adeegga dayactirka a-fasalka koowaad iib aheyn ka dib si loo hubiyo in ay ku oolnimada iyo tayada ka dib-iibka iyo dayactirka. Goobaha dayactirka Our si deg deg ah u cusbooneysiin karaa habka design iyo warshadaha qalabka ugu dambeeyay si ay u buuxiyaan shuruudaha aad u hubinta dayactirka iyo ilaalinta qalabka si habsami leh.
Alxanka ningax dayactir dhululubo iyo kormeerka
shirkadda ayaa laba xarumood dayactirka, mid ka mid ah dhululubada gaaska alxanka dahaaran xarunta soo saarta iyo mid alxanka xarunta dayactirka dhululubo kulaylka-dahaaran la 750m2. Xarumaha adeegga Labada leeyihiin farsamo oo taageero farsamo oo dhamaystiran iyo qalab horumarsan. Waxay cusboonayn karo dhululubada gaaska welded laga keeno galay warshad inuu ka hor tago heerarka dhalo cusub. Our adeega dayactirka dabacsan kulmi karaan wax kasta oo looga baahan yahay qofka macaamilka ah!
Shirkada iyo machadka kormeerka gaarka ah waa la-hawlgalayaasha istiraatiiji ah oo ku siin kara qiimo jaban, adeegyada baaritaanka rasmi ah oo hufan loogu talagalay macaamiisha. Iyo sameysmi karaa adeeg one-stop ah adeegyada dayactirka ay bixiso shirkadda.
Cryogenic dayactirka dareere taangiga, imtixaanka, dhaqmaan
In aagga warshadda shirkadda ee, aad taangiga lagu xirfad iyo waxtar leh soo ogaan doonaa oo waxaa cusboonaysiiyey at markii ugu horeysay, soo celinta taangiga si heer cusub. Shirkada iyo Institute Inspection Gaarka ah wadaagtaan istiraatiiji ah oo aan keliya oo ay bixiyaan adeegyada baaritaanka si ay macaamiisha, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan adeegyo dhaqmaan waayo filtarka taangiga.
Dayactirka Home iyo adeegyada
farsamo adeega beerta khibrad leh shirkada ayaa xamili karo on-site dayactirka iyo hagaajinta, iyo bilaabi kartaa oo gaaray waqti gaaban. Our takhasus adeeg on-site lagu dhiso karo qalabka cryogenic ku dhowaad dhammaan on-site, bixinta adeegyada on-site ka mid yihiin: helium ogaanshaha dillaac, kormeerka vacuum, dayactirka, iyo adeegyada dayactirka bedelka biiyaha.
Next: weel cadaadis
Alxanka dhalada gaaska qalabada
Cryocart Taxanaha (Qaab Irregular)
Liquid Nitrogendoksid , Jumlada Argon Waayo, Alxanka , Microbulk Systems , Hudh Alxanka dhululubada ah, waayo, Liquid Cryogenic , Liquid Carbon Dioxide , Electric Vaporizers ,